Beesha Caalamka oo la kulantay Lafta-gareen | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo la kulantay Lafta-gareen
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa la kulmay xubno ka tirsan wakiilada Beesha Calamka oo booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee KGS.
BAYDHABO, Soomaaliya - Madaxweynaha Dowlad Gboleedka Koonfur Galbeed ayaa wafdi ay hogaamineysey ku xigeenka koowaad ee wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arimaha Soomaaliya ku qaabilay madaxtooyada maamulkaasi ee magaalada Baydhabo.
Wafdiga waxaa qeyb ka ahaa wakiilada Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo diblumaasiyiin kale.
Waxay kawada hadleen joogteynta xiriirka wadashaqeeneed ee Koonfur Galbeed iyo xubnaha Beesha Caalamka iyo sidoo kale Xaqiijinta shirka looga balansanyahay 20 -ka bishan in uu ka dhaco Caasimada Dalka ee Moqdisho.
Maamulka KGS oo kamida maamullada horay utaageeray muddo kororsigii Farmaajo, ayaa aqbalay dib uga laabashada arrintaas iyagoo taageeray in la dhaqan galiyo heshiiskii 17 -kii September kaasoo KGS ay qeyb ka ahayd saxiixayaashii heshiiskaas.